Accueil > Gazetin'ny nosy > Kianjan’ny 13 May: “Governemanta iarahan’ny Mapar sy ny Tim no hijoro”
Kianjan’ny 13 May: “Governemanta iarahan’ny Mapar sy ny Tim no hijoro”
Voalohany teo amin’ny tantaran’i Madagasikara no nisy hetsi-bahoaka nanerana ny renivohi-paritany enina tao anatin’ny andro iray, dia ny tamin’ny sabotsy teo. Nidina tany amin’ny faritany ireo “solombavambahoaka ho amin’ny fanovana” miisa 73, nizara enina izy ireo, tamin’ny sabotsy. Samy namory vahoaka tamin’ny renivohi-paritany avy. Nangorom-potsy avokoa ny toerana nifamotoanana tamin’ny ambanilanitra, na tany Toliara na tany Antsiranana, na tany Mahajanga, na tany Toamasaina, na tao Fianarantsoa na teto Antananarivo.
Voalohany no nisian’izany ary ara-bakinteny ny hoe “Tolom-pirenena”. Tokana ny tarigetra dia ny fanavotana an’i Madagasikara sy ny tolona ho amin’ny fanovana, ka ny fitakiana ny fialan’ny fitondrana Rajaonarimampianina no isan’ny fototra ny fiombonam-peon’ny Malagasy tamin’ireo faritany enina ireo fa fepetra tsy azo ifampiraharahana, satria izay no antoky ny fahafahana manavotra an’i Madagasikara sy miroso amin’ny tena fanovana.
Nohamafisin’ireo “solombavambahoaka ho amin’ny Fanovana” ireo omaly tetsy amin’ny kianjan’ny 13 May izany, tamin’ny alalan’ny mpitondra teniny, dia ny Me Razafimanantsoa Hanitra. Nambarany fa “nisy tokoa ny fanekena ny fihaonana tamin’ireo Raiamandreny ara-panahy eo anivon’ny Ffkm androany (omaly maraina io), ka nametrahana tamin’izy ireo ny hetahetan’ny vahoaka.” “Tsy misy idiran’ny lehiben’Antoko misy anay avy izany”, hoy ireto solombavambahoaka ho amin’ny fanovana, “na Rajoelina avy amin’ny Mapar na Ravalomanana avy amin’ny Tim na i Hajo Andrianainarivelo mpitarika ny “Mmm” na i Camille Vital avy amin’ny “Iaraka Isika” fa tolon’ny vahoaka tarihin’ny solombavambahoaka no atao”. “Ny fifampiresahana dia ekena saingy fepetra mialohan’izany ny fametraham-pialan’ny fitondrana Rajaonarimampianaina, ka ampitainareo Raiamandreny ara-panahy any amin’izy ireo izany”, hoy ny Me Razafimanantsoa Hanitra nitatitra ny resaka tamin’ny vahoaka. Notsindrian’ity mpitondra tenin’ny solombavambahoaka ho amin’ny Fanovana koa fa “tsy mamatotra andraikitra anay solombavambahoaka 73 sy ny vahoaka tarihinay amin’izao tolona izao ny fifampiraharahana sy fifampiresahan’ny filohan’antoko any ambadika any”. Te hilaza ny Me Razafimanantsoa Hanitra teo fa “na marina na tsy marina ny fihaonan-dRavalomanana sy Rajaonarimampianina dia tsy mamatotra ny eo amin’ny Kianjan’ny 13 May izay resaka ifanarahany any.”
“Ny Filohampirenena sy ny Governemanta natsangany ary ireo loholon’i Madagasikara izay notendreny izany no tafiditra ao anatin’ireo fitakiana hametra-pialana ireo”, hoy ihany ny avy etsy amin’ny Kianjan’ny 13 May.
Rehefa vita izany dia miroso hatrany amin’ireo fepetra takian’ny Lalàmpanorenana mba hahafahana mampihodina ny raharaham-panjakana ny tohin’ny tolona, hoy izy ireo, ka rehefa miala miaraka amin-dRajaonarimampianina ry Rivo Rakotovao, izay filohan’ny Antenimierandoholona, dia tsy misy filohan’ny Antenimieran-doholona afaka misahana vonjy maika ny asan’ny filohampirenena izany ka ny Lalàmpanorenana koa dia manipika amin’izay fotoana izay fa “miara-miantsoroka ny andraikitra ny Filohampirenena ny mpikambana mandrafitra ny governemanta”. Satria efa miala ny Governemanta ankehitriny tarihin’i Solonandrasana Olivier Mahafaly, hoy hatrany ny “Solombavambahoaka ho amin’ny Fanovana”, dia ny takian’ny Lalàmpanorenana ihany no entina manangana ny governemanta. Ny Lalàmpanorenana tokoa mantsy dia milaza fa “ireo antoko manana ny maro an’isa eo anivon’ny Antenimierampirenena no mandrafitra ny governemanta”. Mazava fa ny Mapar sy ny Tim, ampian’ny Mmm sy ny “Iaraka Isika” ary ny depiote mahaleo tena miara-dia amin’izy ireo ho amin’ny “Fanovana” no maro an’isa, ka izy ireo izany no miara-mandrafitra ny governemanta.
Ny ho andraikitr’io Governemanta io, araka ny fanampim-panazavana tetsy amin’ny Kianjan’ny 13 may omaly dia ny mampihodina ny raharaham-pirenena ankobanandro sy ny fanatanterahana ny fifidianana araka ny fepetra takian’ny Lalàmpanorenana ihany (30 andro ka hatramin’ny 60 andro aorian’ny fahabangan’ny toeran’ny filohampirenena).
Etsy ankilany, nivoitra koa ny tsy maintsy andraisan’ny fitondrana fepetra ifehezana ny vidim-piainana sy ny olana sosialy isan-tokony.